समाचार - आवश्यक फर्नीचर टुक्रा प्रत्येक बेडरूम आवश्यक छ
धेरै तरिकामा, एउटा सुत्ने कोठा कुनै पनि घरको सबैभन्दा आवश्यक कोठा हो। यसले तपाइँलाई लामो दिन पछि आराम गर्न र स्फूर्ति दिन मद्दत गर्दछ, र तपाइँको शयन कक्षको डिजाइनले उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्दछ जुन निन्द्रालाई प्रोत्साहित गर्दछ। सहि फर्निचरमा लगानी गर्नाले तपाईंलाई यो प्राप्त गर्न र तपाईंको निद्राको गुणस्तर र मात्रा बढाउन मद्दत गर्दछ। बेडरूममा राखिएको फर्निचरका केही आवश्यक टुक्राहरूलाई एक चोटि हेरौं।
१. आरामदायी सीट
के तपाई त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जुन सुत्ने कोठा वा चिसोको कप पनी सुत्नु भन्दा पहिले मनपर्‍यो? फर्निचर किन्नुका थुप्रै कारणहरू छन्, तर तपाईंको बेडरूममा आरामदायी सीट राख्नु तपाईंको लागि उत्तम रूपले काम गर्दछ। यो तपाईं मद्दत गर्न र तपाईं सुत्न जानको लागि तयार रूपमा आराम गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईं एक आर्म चेयर, एक recliner, वा एक दलाल कुर्सी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै तपाइँको आवश्यकता र प्राथमिकतामा निर्भर गर्दछ। आराम बढाउन बाहेक, सहि फर्निचर थप्नाले तपाईंको बेडरूम सुन्दर बनाउन सक्दछ।
२. एक गुणस्तरको ओछ्यान
तपाईंको ओछ्यान तपाईंको बेडरूममा फर्नीचरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टुक्रा हो। एक आरामदायी गद्दा र एक स्टाइलिश फ्रेम स्वस्थ र आरामदायी निद्रा लाई बढावा दिन लामो यात्रा गर्दछ। यदि तपाईं आरामदायी निद्रा अनुभव पाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले गुणस्तर, विशाल र आरामदायी ओछ्यानमा लगानी गर्ने विचार गर्नुपर्छ।
B. बेडसाइड टेबल
फर्निचरको दायाँ टुक्राको साथ, तपाईं सुस्त बेडरूमलाई एक पछाडि राजामा बदल्न सक्नुहुन्छ। पलंग टेबल प्रत्येक बेडरूममा एक महत्त्वपूर्ण टुक्रा हो। यसले तपाईंको ओछ्यानमा पूरक हुन्छ र तपाईंको रातीको आवश्यक चीजहरूलाई तपाईंको पहुँचमा राख्न मद्दत गर्दछ त्यसैले तपाईं ओछ्यानबाट उठ्नुहुन्न वा सुत्नको बेला सार्नुहुन्न। यहाँ, तपाईं एक गिलास पानी राख्न सक्नुहुन्छ, चश्मा, पुस्तकहरू, वा औषधि पढेर ताकि ओछ्यानमा हुँदा तिनीहरू पुग्न सजिलो हुन्छ।
एक वार्डरोब प्रत्येक बेडरूममा फर्नीचरको एक अपरिहार्य टुक्रा हो। यसले तपाईंको सबै कपडाको आवश्यक चीजलाई समात्दछ र तपाईंको पोशाकलाई व्यवस्थित राख्छ। यसले बेडरूममा अव्यवस्थालाई न्यूनतम पनि गरी सबै चीज एकै साथ तानेर। तपाईं या त स्ट्यान्डअलोन वा इनबिल्ट वार्डरोब आफ्नो प्राथमिकतामा निर्भरता छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
Dress. ड्रेसिंग टेबल
प्रत्येक सपनाको बेडरूममा ड्रेसर समावेश हुनुपर्दछ। यसले भव्यताको स्पर्श दिन्छ र तपाइँलाई तपाइँको वस्तुहरू व्यवस्थित राख्न मद्दत गर्दछ। ड्रेसरले बिभिन्न प्रकार्यहरू प्रदान गर्दछ, जस्तै तपाइँको व्यक्तिगत सामानहरू, कपडा, क्षुद्र नगद, वा अन्य साना सामानहरू सफासँग भण्डारण। भण्डारण बाहेक, ड्रेसरले तपाईंको कोठामा सजावटको अतिरिक्त शैली ल्याउँदछ। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, ऐना थप्नाले तपाईको व्यक्तिगत पोशाक र उपस्थिति प्रत्येक दिन जाँचमा राख्न मद्दत गर्दछ।